Oovimba be-FED-Funda ukurhweba
Ukubuyiselwa kwe-USD/CAD ukusuka kuMgangatho oPhezulu woNyaka-Okuthe kratya okuPhakamileyo kuninzi phakathi kweHawkish Fed Stance
The USD / CAD igcine ithowuni ethambileyo ye-bullish kwiseshini yase-US ngo-Eva kaKrisimesi kwaye yabonwa ekugqibeleni ukurhweba kwindawo ye-1.2815.
I-Loonie yakhanga abathengi abangaphantsi kwendawo ye-1.2800 ngaphambili namhlanje, kodwa loo ntshukumo yabetha udonga lwezitena kufuphi ne-1.2835 ukumelana. Esi senzo siza emva kokuba isibini se-forex sithintele indawo ephezulu kwi-2021 kwi-1.2963 ngoMvulo. Ukurekhodwa okuphezulu konyaka kwafika emva kokuba amaxabiso eoli ekrwada ehle nge-9.3% phakathi kwe-16 kaDisemba kunye ne-20, exhasa i-USD / CAD.
Imfuno ye-USD/CAD ifakwe kwiNgcipheko ehlaziyiweyo-kwiMood yoMtyali-mali
Nangona kunjalo, iinkunzi ze-USD zazingenalo ukuzithemba ukwenza imali kule nzuzo, ethe yafumana inzuzo ye-USD / CAD phakathi kwemfuno yedola yaseMelika. Ithemba elilandela iingxelo zokuba ukwahluka kwe-Omicron COVID-19 kunokuba yingozi kakhulu kunokothusa ukuzithemba kwabatyali-mali kunye nomdla wokutya womngcipheko. Oku, kulinganisele ii-asethi ezikhuselekileyo kunye neemali, kubandakanywa nedola yaseMelika.
Ngeli xesha, izimvo zamva nje zeFederal Reserve zokuphumeza ubuncinci ukunyuka kwamaxabiso okuthathu ngo-2022 kwandise inkxaso kwiUSD. Kwakhona, okulindelwe ngabahlalutyi kuye kwaqinisekiswa ngamanani angcono-kunokuba bekulindelwe e-US yokunyuka kwamaxabiso ngoLwesine. Ngokucacileyo, i-Federal Reserve's go-to-inflation tracker-I-Personal Consumption Expenditures (PCE) Index yexabiso-kwaye wabhala ukutsiba kwi-5.7% YoY ngoNovemba, ukukhula okuphezulu konyaka kwiminyaka emashumi amane.
Nangona kunjalo, izinto ezikhoyo ezisisiseko kunye nezobugcisa zibonakala zibuyisela iinkunzi ze-USD/CAD. Oku kubonisa ukuba i-USD / CAD inokugxumeka ibheke phezulu kwixesha elisondeleyo. Nangona kunjalo, umfutho usamile xa kuqwalaselwe imbalela yokuphela konyaka yokungabikho kwemali.
tags FED, Forex, iindaba, PriceAnalysis, USD / CAD
I-BOJ, iFederal Reserve, i-BOE kwiveki entsha
I-BOJ inokubanjwa kule veki xa idibana ngolwesiThathu, kunyulo oluzayo kunye nabagqatswa abanokubakho bethembisa amanyathelo okonyusa imali. Kwiveki ephelileyo, idola kunye ne-yen bezizinkokheli ezingenakuphikiswa kwiimarike zemali. Ngelixa iFed ingenakulindeleka ukuba ibhengeze ukusika kule veki, idatha eyomeleleyo yamva nje icebisa ukuba uNovemba lelona xesha libekiweyo. Amasheya aseMelika naseYurophu aphulukene nobuninzi bokunyuka kwawo njengoko iibhanki eziphambili ziqala ukulungiselela ukunciphisa ukuncipha.
Ngaphandle kwalonto, kukho inkxalabo malunga nokwanda kwakhona kwengxwabangxwaba phakathi kwe China ne-United States, nabahlobo abasondeleyo e-United Kingdom nase-Australia baphoswa kulo mxube. Kwimeko yoqoqosho olucothayo, ubungakanani bempembelelo yengxaki yase-Evergrande yase-China ikwajongana nayo.
Kwiveki ephelileyo ibiyiveki yokumisela, inedatha eninzi yezoqoqosho yokuqinisekisa ngesiqwenga phambi kokuba iibhanki eziphambili zidibane kule veki zigqibe ekubeni zithathe okanye zingathinti. I-Bhanki yase-Japan kungenzeka ihlale imile, kodwa ngaba i-Federal Reserve yase-United States iza kubhengeza ukuba iza kuqala ukunciphisa ukuthengwa kwe-bond? I-BOE ibonakala ngathi iye yanda ngakumbi, kodwa ngaba le meko iya kuqhubeka? Ngaphandle kweentlanganiso zebhanki esembindini, iUnited States iqalile ukuxoxa ngokuphakamisa ukuhlawulwa kwetyala. I-US iyakuphelelwa yimali malunga nenyanga, ngokukaNobhala Wezemali uJanet Yellen, ngaphandle kokuba kuphakanyiswe ityala. Kananjalo, njengoko umdlalo we-Evergrande uqhubeka eTshayina, ngaba baya kusindiswa okanye bagwetyelwe ukusilela?
I-BOJ, FED, kunye neBOE Kule Veki izayo
I-BOJ, i-FED, kunye ne-BOE ziya kudibana kule veki ukuxoxa ngokunyuka kwamaxabiso, ukuthengisa kwintengiso kunye nedatha yengqesho. Ngaba imarike yemasheya ithengisiwe kwiveki ephelileyo konke malunga nokubekwa kunye nokuthatha inzuzo ngaphambi kweentlanganiso zebhanki ephakathi zale veki? I-RBA, i-BOC, kunye ne-ECB ibibambe iintlanganiso kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, ubukhulu becala, njengoko bekulindelekile. Kwakungabikho ukuvuvukala okukhulu. Kule veki, nangona kunjalo, izinto zinokwahluka, njengoko i-BOJ, FED, kunye ne-BOE phakathi kwabanye zicwangciselwe ukudibana.
Ngaphandle kwenkomfa yeendaba yezoqoqosho eqhubayo kaKuroda kwiveki ephelileyo, ukwathe nexabiso lentengo liza kuba malunga ne-1% ngo-2023 kwaye ukulungele ukwenza okungaphezulu ukunceda uqoqosho xa kukho imfuneko. I-BOJ inokubanjwa kule veki xa idibana ngolwesiThathu, kunyulo oluzayo kunye nabagqatswa abanokubakho bethembisa amanyathelo okonyusa imali.
NgoLwesithathu, i-Federal Open Market Committee, ebanjwe ngusihlalo weRhuluneli uJerome Powell iya kudibana. Izithethi eziphambili zaxoxwa phambi kwentetho kaPowell kwiJackson Hole Symposium, apho angakhange abonelele ukuba iFed yayikulungele ukubetha. Oku kubonakala ngathi lithuba likaPowell lokwazisa ukuba iFed iza kuqala ukubamba.
tags BOE, FED, IBOJ